Nei Bamboo Packaging Iri Ramangwana |Haishu
KuJudin kurongedza, isu tinogara takatsvaga zvinhu zvitsva izvo vatengi vedu vari kupenga nazvo.Kurongedza kunoitwa kubva mushenjere kuri kuramba kuchiwedzera kufarirwa gore rega rega, uye nechikonzero chakanaka: inzira ine eco-inoshamwaridzika kune petroleum-based zvinosvibisa zvinokwanisa kuchengetedza kusimba kunoshamisa.
Chii Chinoita Bamboo Fiber Packaging Yese Hasha?
Kunyangwe kupfuura akawanda eco-hushamwari zvinhu, bamboo fiber kurongedza ndeyeultra-renewable.Inokwanisa kukura zvinoshamisa nekukurumidza, uye nekuda kweizvi, yave yekuenda kune vatengesi pasi rese.
Kubatsira kwezvakatipoteredza kwe bamboo kwakakura.Bamboo inobatsira kuenzanisa zvinokuvadza CO2 emissions nekuburitsa inopfuura 30% yakawanda oxygen pane muti wehuremu hwakaenzana.Hachiziwo chirimwa chinoda kudzika midzi kana chatemwa, asi kana chaitwa nemazvo, chinobatsira kudzivirira kukukurwa kwevhu.Sezvo bamboo achiwanzo kurira munzvimbo dzinonaya mvura yakawanda dzinogona kuwira pasi nyore mukukukurwa kwevhu, iyi yakabikwa-mubatsiro ndicho chikonzero chikuru nei yave kufarirwa nevarimi.
Imwe Alternate Iyo Inomira Kunze
Haisi chete zvigadzirwa zve bamboo fiber isarudzo ine hushamwari, asi inogara yakasimba uye yakasimba pane zvinowanzoshandiswa zvinongedzo.Bamboo yakasikwa antibacterial uye antifungal, inobvumira kusimba pasina kuwedzera makemikari.Chitarisiko chepamusoro chezvigadzirwa zvezvirimwa izvi zvinoita kuti ive sarudzo inoyevedza kana ichienzaniswa neyechinyakare, isiri-compostable zvigadzirwa.
Tsvaga Yako Itsva Eco-Hushamwari Alternative
Kana iwe uchitsvaga kudzikisa kabhoni tsoka yako, funga kugadzira switch kubva kustyrofoam uye zvepurasitiki zvinoraswa kune eco-hushamwari uye inogoneka sarudzo.KuJudin kurongedza, tinopa zvakasarudzwa zvigadzirwa zvakagadzirwa kubva ku100% bamboo fiber bepa rinoita compost mukati memwedzi 2-4 munzvimbo yekutengeserana yecompost.
Yedu bamboo fiber makapu uye mabhokisi nemavharo anouya mune akawanda saizi sarudzo uye anogona kuve mufiriji kana kuomeswa nechando.Kutsvaga zvekudya kana kutora zvinodikanwa?Isu tinopawobamboo paper cup,bamboo paper takeaway box,bamboo paper soup cup,bamboo pepa saladhi ndirouyebamboo bepa ice cream mukombeyakagadzirwa kubva mushenjere yechisikigo uye yekudyara fiber yakanakira bhizinesi rako.